सरकारले सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो विषय ...
यस्तो छ क्षेत्रगत बजेट: कुनमा के कति ?
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता ...
१३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसदको आजको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री ...
निजामती कर्मचारीको तलब थोरै बढ्ने
मुलुक संघीयतामा गएको तीन वर्षपछि सरकारले राजस्व असुलीको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर पहिलोपटक पूर्ण आकारको संघीय बजेट ल्याउँदैछ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार दुवै सदनको संयुक्त बैठकसमक्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आयव्यय ...
आज अपराह्न ४ बजे संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत हुने
काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को पूर्ण संघीय बजेट ल्याउँदै छ । संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा)को अपराह्न ४ बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा ...
सुन प्रकरण : उम्किएकाहरु नै फेरि तस्करीमा !
काठमाडौँ, १५ जेठ । डेढ बर्षअघि बरामद ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उम्किएकाहरुले नै त्यहि धन्दालाई निरन्तरता दिएको खुलेको छ । अलिहेको सुन तस्करी काण्डका मुख्य आरोपित गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतिसहितका व्यक्ति ...
भोलि बजेट प्रस्तुत हुँदै
सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।संविधानको धारा ११९ अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मंगलबार अपराह्न ४ ...
काठमाडौँ, १४ जेठ । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार तीन खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बढेर यो वर्ष ३० खर्ब सात अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अउपलब्ध तथ्यांक र ...
तारे होटलको संख्या बढ्यो
सेवा क्षेत्रको मुख्य आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ । यस क्षेत्रको प्रमुख पूर्वाधार मध्येको तारे होटलको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको पाइएको हो । संघीय संसद्मा आज अर्थमन्त्रीले ...
विवादित व्यक्ति विज्ञसमूहमा मनोनयन भएपछि…
पोखरा, १३ जेठ । फेवातालको मापदण्ड मिचेर वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट सञ्चालन गरेका सुनील शाक्य पर्यटन विज्ञसमूहमा मनोनीत भएका छन् । विवादित व्यक्ति विज्ञसमूहमा मनोनयन भएपछि पोखरामा विभिन्न पार्टीका नेता तथा नागरिक समाजबाट विरोध ...
३३ वर्षमा साढे ११ लाख रूख काटिए
काठमाडौं, १२ जेठ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विकास निर्माणका लागि भन्दै ३३ वर्षमा साढे ११ लाख रूख काट्न अनुमति दिएको छ । ०४२ सालदेखि चालू आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को वैशाखसम्म ११ ...
यस्तो आउँदैछ बजेट
काठमाडौं, १२ जेठ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत तथा संवैधानिक निकायका लागि बजेटको प्रारूप तयार पारेको छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा ढिलो गरी बजेट निर्माणमा जुटेको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीतिगत निर्णय ...
कर्मचारीको तलब नबढ्ने
अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्ष निजामति कर्मचारीको तलब बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । तलब बढाउन माग राख्दै बुधबार अर्थ मन्त्रालय पुगेका निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिलाई उनले ...
नीति तथा कार्यक्रमपछि सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको छ । स्थायी सरकारको पहिलो बजेट भएकोले यस बजेटलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् । खासगरी बजेटको चासो सधैं कर्मचारीहरुलाई हुने गर्छ । बजेटमार्फत ...
साढे ३३ किलो सुन तस्करी : थुनछेक बहस सकियो
साढे ३३ किलो सुन तस्करी र मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणको थुनछेक बहस जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासमा सोमबार सकिएको छ । प्रतिवादीकातर्फबाट जम्मा ५६ जना कानुन व्यवसायीले ...
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको कामलाई समिक्षात्मक टिप्पणी गरेको छ । जसअनुसार आज(मंगलबार) पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले नेकपा सरकारको २१ महिनाको समीक्षात्मक टिप्पणी २१ ...
३ मंसिर, एजेन्सी । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–अनले मुलुकको सेनालाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले आयोजित पारासुट सैन्य अभ्यासको अवलोकन गरेका छन । संयुक्तराज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियाले कोरियाली द्वीपलाई नै ...
३ मंसिर, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाटै मानविकी संकायअन्तर्गत स्नातक तहको नक्कली लब्धांकपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्र जारी भएको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनका क्रममा तत्कालीन परीक्षा प्रशासन महाशाखा ...
३ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ र ११ बाट नयाँ पाठ्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले १५ विषयको पाठ्यक्रम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्बाट ...
13th Aug 2019 पिएसजे न्युज
अमेरिकाको भिसा र ग्रीन कार्ड लिन अब अझै गाह्रो हुने भएको छ । अमेरिकाले आप्रवासीको भिसा अवधि बढाउने र ग्रीन कार्ड लिने प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ । आप्रवासीका मामलामा सुरुदेखि नै कठोर ...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बाकुस्थिति अतेस्गाह मन्दिरको अवलोकन गरेका छन् । १७औं र १८औं शताब्दीमा बनेको र हिन्दु, शिख तथा जोरोअस्ट्रियनले पूजा गर्ने पाँचकुने यस मन्दिरलाई बाकुको अग्नि मन्दिर पनि भनिन्छ ...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रगतमा ‘क्रिएटिनिन’को मात्रा बढेपछि यो शब्द यतिबेला चर्चा र चासोमा छ। ओली उपचारका लागि दुई सताभित्रै दोस्रो पटक उपचार गर्न सिंगापुर उडे। शरीरबाट निस्कने यही व्यर्थ पदार्थ ...